उहाँ शान्ति ल्याउनुहुन्छ, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
"अब जब हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छौं, तब हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरसँग हामी शान्तिमा छौं।" रोमी 5: १
एक यहूदी यहूदी समूह हास्य कलाकार समूह मोन्टी पाइथनको स्केचमा विराजमान छ (जिलियट) अँध्यारो कोठामा र रोमको ओभरथ्रोलाई चिन्तन गर्दछ। एक जना कार्यकर्ता भन्छन्‌: “तिनीहरूले हामीसित भएको मात्र होइन हाम्रा पिता-पुर्खाहरू र सबै कुरा पनि लगे। र उनीहरूले हामीलाई के फिर्ता दिएका छन्? "अरूहरूका जवाफहरू थिए:" "पानी, सेनेटरी सुविधाहरू, सडक, औषधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाइन, सार्वजनिक स्नानहरू, तपाईं सुरक्षित रूपमा रातमा सडकमा हिंड्न सक्नुहुन्छ। जानुहोस्, तिनीहरू कसरी अर्डर राख्न जान्दछन्। "
उत्तरहरूले थोरै रिसाए, त्यस कार्यकर्ताले भने: "ठीक छ ... राम्रो सरसफाई र राम्रो औषधि र शिक्षा, कृत्रिम सिंचाइ र सार्वजनिक स्वास्थ्य हेरचाह बाहेक ... रोमीहरूले हाम्रो लागि के गरे?" उत्तर मात्र थियो: "तिनीहरूले शान्ति ल्याए! "
यस कथाले मलाई केही मानिसहरूले सोधेको प्रश्नको बारेमा सोच्न बाध्य तुल्यायो, "येशू ख्रीष्टले हाम्रोलागि के गर्नुभयो?" यस प्रश्नको उत्तर तपाईं कसरी दिनुहुन्छ? रोमीहरूले गरेका धेरै कामहरू सूचीबद्ध गर्न सक्षम हुने क्रममा हामीले पक्कै पनि येशूले हाम्रोलागि गर्नुभएका धेरै कुराको गणना गर्न सक्नेछौं। तर आधारभूत उत्तर उही हो जुन स्केचको अन्त्यमा उल्लेख गरिएको थियो - यसले शान्ति ल्यायो। यो उहाँको जन्ममा स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरे: "सर्वोच्चमा परमेश्वरको महिमा, र सुखविलासको बीचमा पृथ्वीमा शान्ति!" लूका २:१:2,14
यो पद पढ्न र सोच्न सजिलो छ, "तपाईं ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ! Peace? येशू जन्मनुभएदेखि यस पृथ्वीमा कुनै शान्ति भएको छैन। ”तर हामी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य वा युद्धको अन्त्यको बारेमा कुरा गरिरहेका होइनौं, तर येशू आफ्नो बलिदानमार्फत हामीलाई प्रदान गर्न चाहनुहुने परमेश्वरसँगको शान्तिको कुरा गर्दैछौं। कलस्सी १: २१-२२ मा बाइबल यसो भन्छ, “अनि तिमीहरु जो पहिले विचलित भएका थियौ र दुष्ट कामहरुमा आत्मा अनुसार शत्रुहरु, अब उनी मृत्युको माध्यमले आफ्नो शरीरको शरीरमा मेलमिलाप गर्दछन्, ताकि तपाईलाई पवित्र र निर्दोष बनाउनेछन्। दण्डवत् आफैलाई अगाडि "
शुभ समाचार यो हो कि आफ्नो जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान र स्वर्गमा जानु भन्दा पहिले, परमेश्वरसंग शान्तिको लागि हामीले चाहिने सबै कुरा गरिसकेका छौं। हामीले गर्नुपर्ने भनेको उहाँलाई स्वीकार्नुपर्दछ र विश्वासको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्दछ। "तसर्थ, अब हामी परमेश्वरसँगको हाम्रो नयाँ सम्बन्धमा रमाउन सक्छौं किनभने हामीले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरसँग मेलमिलाप पाएका छौं।" रोमी :5:११
हे पिता, धन्यवाद छ कि हामी अब तपाईका शत्रुहरू होइनौं, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट तपाईंले हामीसँग मिलाप गर्नु भएको छ र अब हामी तपाईंको साथी भएका छौं। हामीलाई शान्ति ल्याउने त्यागको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। आमेन